Iva nehutano hwakanaka hwemakemikari uye yakanyanya kupisa tembiricha Inoshandiswa mune yakaoma firimu, tarisheni, zvekushandisa zvekumwaya, kupuruzira, maturusi ekucheka, indasitiri yesimbi, muchadenga pamwe nedzimwe nzvimbo. Seyesimbi ceramic uye tungsten-yakavakirwa carbide alloy zviyo yekunatsiridza mumiriri, inogona zvakanyanya kugadzirisa chiwanikwa kuita
Molecular fomula VC
Nzvimbo yakanyunguduka 2800'C
Kuwandisa 5. 41g / cm3
Zvishandiso Iva nehutano hwakanaka hwemakemikari uye yakanyanya kupisa tembiricha Inoshandiswa mune yakaoma firimu, tarisiro, zvekushandisa zvekumwaya, kupopera, maturusi ekucheka, indasitiri yesimbi, erospace uye mamwe minda. Seyesimbi ceramic uye tungsten-yakavakirwa carbide alloygrain yekunatsiridza mumiriri, inogona zvakanyanya kugadzirisa iyo alloy performance
Molecular fomula: VC
Molecular uremu: 62.95
Properties: Vanadium carbide igrey yesimbi poda ine 19.08% kabhoni (mashoma),
ndeyesodium chloride cubic crystal system.
Kuwandisa (g / mL, 25 ℃): 5.77
Hukama hwemhepo density (g / mL, mhepo = 1): haina kutsanangurwa
Nzvimbo yakanyunguduka (℃): 2810
Boiling poindi (℃, mumhepo kumanikidza): 3900
Yakadzikama pasi peyakajairika tembiricha uye kumanikidza. Kudzivirirwa zvinhu oxides. Micro Vickers kuomarara (kutakura 50g) 2944kg / mm, ine nzvimbo yakanyunguduka (2830 ℃) .ushandise Iyo inogona kushandiswa seyunura zviyo mune yakaoma chiwanikwa, yekucheka chishandiso uye indasitiri yekugadzira simbi, iyo inogona pachena kugadzirisa zvinhu zvealloy.
Inoshandiswa pakucheka chiwanikwa chakaomarara, kugadzira firimu - risingapindiri firimu uye semiconductor firimu.
Vanadium carbide ine hurefu hwakaoma, kusungunuka poindi uye kwakanyanya tembiricha simba uye zvimwe zvakajairika hunhu hwekushandurwa kwesimbi carbide, pamwe neakanaka kuitisa uye kupisa kwekushisa, saka mune simbi nesimbi simbi, yakaoma chiwanikwa, zvigadzirwa zvemagetsi, zvinokonzeresa uye yakanyanya tembiricha yekupfeka zvinhu uye mamwe minda ane akasiyana siyana ekushandisa. Izvo zvakataurwa mumabhuku kuti iyo thermodynamic kugadzikana kweakasiyana carbide inhibitors inosarudza iyo inhibitory mhedzisiro, uye iyo inhibitory mhedzisiro odhiyo iVC> Mo2C> Cr3C2> NbC> TaC> TiC> ZrC. Kuwedzerwa kwevanadium carbide kunogona zvakare kushandiswa sedanho rakaoma kuvandudza zvakanyanya kuomarara uye hupenyu hwecemented carbide, uye kudzikisira magnetization akazara, remanence, kumanikidza simba remagineti, simba remagineti chigadzirwa, magineti kukwana uye curie tembiricha yesamende carbide kuburitsa. isina-magnetic alloy.
Nekuwedzera kwekushandisa kwesamende carbide mune yepamusoro-tech zvombo nemidziyo, yekucheka-kumucheto sainzi uye tekinoroji uye simba renyukireya, zvinodikanwa kuti uwedzere kugadzirisa mashandiro eWC alloy. Nzira yakanakisa ndeyekunatsiridza zviyo zvaro uye kugadzirira ultrafine kana kunyange nanostructured simende carbide. Kune nanometer yakasimbiswa carbide poda, kukura kwezviyo kunoitika kana uchinge wakatsvukiswa pa1 150 ℃. Kana iyo tembiricha yekudzvinyirira yeiyo inhibitor yakakwira, hazvisi izvo chete zvakaoma kutamba chinodzivirira, asi kunyangwe ichikanganisa mashandiro esamende carbide. Naizvozvo, kudikanwa kweano-zviyo inhibitors kuri kuwedzera nekukurumidza, uye kugadzirirwa kwe nano-vanadium carbide poda kwakwezva kutariswa kwevakawanda vaongorori. Sezvo hukama hwekabhoni neoksijeni hunowedzera pamwe nekuwedzera kwetembiricha, uye kudyidzana kwesimbi dzakasiyana siyana neoksijeni kuchiderera nekuwedzera kwetembiricha, simbi inoenderana kana kabhodhi inogona kugadzirirwa nekabhoni yekudzikisa oxide patembiricha yakakwira. Carbon kudzikisira yezvakakura zvigadzirwa zve CO, CO2, inogona kubvisa chigadzirwa nezvimwe zvisakachena kusvibiswa kwechiitiko. Naizvozvo, iyo carbothermal yekuderedza nzira ine hunhu hweyakareruka maitiro, nyore kuwanikwa kweasina kugadzirwa zvinhu, zvakanaka kudzokorora uye zvichingodaro, uye ine yakanyanya inoshanda kukosha.
Vanadium carbide ine hurefu hwakaoma, kusungunuka poindi uye kwakanyanya tembiricha simba uye mamwe maitiro akajairika ekushandurwa kwesimbi carbide, pamwe nemagetsi akanaka uye anopisa conductivity, saka mune simbi nesimbi simbi, yakaoma chiwanikwa, zvigadzirwa zvemagetsi, zvinokonzeresa uye yakanyanya tembiricha yekupfeka zvinhu uye mamwe minda ane akasiyana siyana ekushandisa. Pakati pavo, vanadium carbide inogona kuwedzerwa kune simbi yekuvandudza iyo yakazara simbi simbi senge kupfeka kuramba, ngura kuramba, kuomarara, simba, ductility, kuomarara uye kupisa kwemhepo kuneta, uye inogona kushandiswa sekupfeka kusagadzikana kwezvinhu mukucheka kwakasiyana uye pfeka zvishandiso zvinodzivirira. Uye zvakare, vanadium carbide sechinhu chitsva chakakwenenzverwa chave kushandiswa zvakanyanya nekuda kwekuita kwayo kwepamusoro, kusarudzika, kudzikama uye kushora "catalyst poisoning" mune hydrocarbon reaction. Uye zvakare, vanadium carbide inogona zvakare kushandiswa senge nyowani kabhoni sosi yekugadzira mangoda. Basa rakakoshesesa revanadium carbide rinofanira kushandiswa seye inhibitor yezviyo mumunda we cemented carbide uye cermets, izvo zvinogona kudzivirira kukura kweiyo WC zviyo munguva yeku sintering.
Pashure: Aluminium Carbide Upfu, Al4C3
Zvadaro: Niobium Carbide upfu, NbC
Vanadium aruminiyamu carbide upfu Mafekitori
Vanadium aruminiyamu carbide upfu Fekitori
Vanadium aruminiyamu carbide powder Mugadziri
Vanadium aruminiyamu carbide powder Vagadziri
Vanadium aluminium carbide powder Mutengo
Vanadium aruminiyamu carbide upfu Quotes
Vanadium carbide powder Mugadziri